Madaxweynaha Dawlad Degaanka Somalida oo Wacdaro ka Dhigay Waqooyiga Maraykanka – Rasaasa News
Jan 25, 2011 criminal, Eritrea, ethiopia, Jwxo-shiil, Madaxweynaha Dawlad Degaanka Somalida oo Wacdaro ka Dhigay Waqooyiga Maraykanka, ogaden peace, onlf peace
Waxaa maalintii Axda ahayd ka dhacay magaalada Minneapolis shir wada tashi ah oo ay Jaaliyada Degaanka Somalida Itobiya ku martiqaaday Madaxweynaha iyo waft balaadhan oo uu hogaaminayo.
Waxaa ka dhacay magaalada Minneapolis Axadi arin aan abid hore uga dhicin dalka Maraykanka, taas oo ah in Hall ay isugu yimaadaan 2100 ruux oo ka soo jeeda degaanka Somalida. Dadkaas oo kuligood taageersan nabada iyo horumarka degaanka Somalida iyo nidaamka ka jira degaanka.
Isu imaatinkan ayaa waxaa uu ka yaabiyey masuuliinta Minneapolis ee dalka Maraykanka, waxayna qireen in Madaxweynaha Degaanka Somalidu uu yahay madaxweynaha dhabta ah ee ummada Somaliyeed ay leedahay.
Madaxweynaha ayaa warbixin dheer oo ku saabsan hawlaha horumarineed ee ka socda degaanka Somalida Itobiya siiyey dadka shirka ka soo qayb galay. Waxayna dadku aad uga maqsuudeen isbadalka wayn ee ka jira degaanka Somalida Itobiya.
Waxaa dadweynaha shirka ka soo qayb galay madadaalinayey fanaaniin caan ah oo ka soo jeeda degaanka Somalida Itobiya, kuwaas oo hore ula shaqayn jiray Janan Jwxo-shiil, hadase ogaaday xaqiiqda.
Aragtidu Waa Rumaynta ugu Muhiimsan
Aragu Waa Markhaati Ugu Wanaagsan